Homeसमाचारस्वादमा तितो तर उपयोगी करेलाको सेवनबाट हुने फाइदाहरु यस्ताछन…
August 22, 2020 admin समाचार 21416
करेला’को स्वाद तितो भएकै कारण के’हिलाई यो साह्रै नमिठो लाग्दछ भने कतिपय मानिसलाई यहि स्वादका कारण करेला मन पर्दछ ।
ब’जारमा पाइने सबैभन्दा तितो तरकारी नै करेला हो । तर स्वादमा तितो भएपनि करेला स्वास्थ्यका लागी भने निकै फाइदाजनक छ ।
करेलामा भिटा’मिन सी, भिटा’मिन बी १, बी २, बी ३ लगायतका भिटामिनहरु पाइन्छ । यस अलावा करेलामा प्रोटिन र क्या’ल्सियम पाइन्छ ।
करेला’को सेवनबाट हुने फाइदा
करेला’ले शरीरमा बोसो बन्न दिदैन तसर्थ यसको सेवनले तौल कम हुन मद्दत गर्दछ । तितो करेलाको जुस सेवन गर्दा उच्च रक्तचापमा लाभ मिल्दछ । यसले इन्सुलि’नको मात्रा नियमन गर्ने भएकाले रगतमा चिनीको मात्रा सन्तुलन पार्दछ ।
करेलामा फाइबरको मात्रा पाइने भए’काले यसको सेवनपछि छिटो भोक लाग्दैन । यसमा पानीको मात्रा उच्च भ’एकाले तरका’रीको रुपमा खादाँ फाइदा पुग्दछ ।
करेलाको सेवनल बोसो को’शिकाहरु निर्माण र वृद्धि विकास रोक्ने काम गर्दछ । करेलामा क्या’लोरी र कार्बोहा’इड्रेटको मात्रा धेरै हुन्छ । – खबर हब
सुदूर’पश्चिममा आइतबार सा’र्वजनिक बिदा हुने भएको छ
November 24, 2020 admin समाचार 6621
December 13, 2020 admin समाचार 5965
मलाई यस्तो भा’इरल होला भन्ने लागेको थिएन । साथीको विवाह’मा गएकी थिए । सबैले विवाहको भिडियो टिकटक बनाएर राखेका थिए । मैले पनि साथीको वि’दाईको अन्तिम अव’स्थाको भिडियो खिचेको थिए । सबैले खिचेको र टि’कटकमा
December 6, 2020 admin समाचार 6158
गायिका योजना पुरी र गायक राजा खति’वडाको स्वर रहेको गीत ‘थोत्रे साइकल’ सार्व’जनिक भएको छ । भिडियोसहित सार्वजनिक गीतमा प्रेम’कथा व्यक्त गरिएको छ । पुस्कर खतिवडाको शब्द र सं’गीत रहेको गीतमा ओम सुनारको संगीत सं’योजन
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (222957)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (214965)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214640)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (212950)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211828)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210787)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209381)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209273)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (177940)